Masoandro, fasika ary fandosirana ara-tsosialy ao amin'ny Sandals Resorts
Home » Lahatsoratra farany farany » Safety » Masoandro, fasika ary fandosirana ara-tsosialy ao amin'ny Sandals Resorts
Antigua & Barbuda Breaking News • Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana Barbados • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Grenada Breaking News • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao lafo vidy • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana • Safety • Vaovao Mafana Saint Lucia • Tourism • Fifanarahana Travel | Torohevitra momba ny dia • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ilay Sandals Grande Antigua Resort madio, manome ny toerana ilainao, miaraka amin'ny fiainana manokana feno fiainana manokana ilainao avy amin'ny Sandals Resorts.
Eny, Sandals Resorts dia nandray fepetra fiarovana amin'ny ambaratonga hafa. Jereo kely anefa dia ho hitanao fa ny toetra tadiavin'ireo mpandehandeha mihoatra noho ny hatramin'izay tao amin'ireo trano fandraisam-bahiny ireo.
Talohan'ny misasakalina dia tazana nidina nidina nankany amin'ny nosy ny jiro fanamoriana ny sidina American Airlines # 2405 Antigua. Ny fahatongavan'ny fiaramanidina tao amin'ny VC Bird International Airport dia nitondra dikany lehibe tokoa tamin'ity alina ity izay nanehoan'ny fahitalavitra teo an-toerana ny hetsika. Matthew Cornall, tale jeneralin'ny Sandals Grande Antigua, dia isan'ireo nijery.
"Sarotra ny milaza ny fihetseham-po," hoy i Cornall, izay nanangona mpikambana am-polony am-polony teo amin'ny fahitalavitra iray. “Rehefa nijery ny manodidina aho, dia hitako ny ranomasony.”
Ny fahatongavan'ny sidina ara-barotra dia midika hoe Sandals Grande Antigua no ho voalohany amin'ny Sandana 15 Resorts All-inclusive hisokatra indray ho an'ny mpandeha satria ny COVID-19 dia nanery ny toekaren'izao tontolo izao hanidy tamin'ny tapaky ny volana martsa. Raha jerena ny fahitana ny tananao, tsy ho hitanao akory fa nakatona io. Tao anatin'ny fahanginan'ny 10 herinandro lasa izay, ny ekipa dia nitahiry ny fizaran-tany sy ny dobo tao amin'ny toerany Instagram - toe-tsaina vonona hatrany, mitovy amin'ny ekipa fampiantranoana.
Ireo trano bongo amoron-dranomasina voaravaka amin'ny fasika no mahatonga ny toerana mety ho fisokafan'ny morontsiraka
“Renao va izany?” Nanontany momba ireo feo ao ambadika i Cornall. “Ny fihomehezana sy ny fihirana? Izay foana no hahatongavantsika. Ekipa izahay ary… tsy te-hanasongadina loatra an'ity… tena fianakaviana izahay. ”
Tontolo iainana sy mafana. Ara-dalàna toy ny mahazatra izany, raha ny saron-tava sy fonon-tànana anaovan'ny mpikambana ao amin'ny ekipa, fampahatsiahivana ny lohateny izay milaza hoe: "Tsy hitovy mihitsy ny dia." Marina. Tsy azonao atao ny mamily zoro any amin'ny toeram-pivarotana Sandals raha tsy mandalo dispenser mpanadio tanana na mahita olona mamafa ny teboka mikasika azy isaky ny 15-30 minitra, na nokasihina ireo teboka na tsia.
Saingy alohan'ny hidirany lalina any amin'ny "tsy misy ny maraina," te-hanasongadinana zavatra hafa i Cornall izay manan-danja indrindra amin'ny fananana Sandals rehetra:
"Ho anay dia hitovy foana ny zavatra sasany."
Ny Resort Sandals Grande Antigua dia miorina eo amoron'ny morontsiraka fotsifotsy lava indrindra ao Dick Bay Bay.
Fomba fijery mivelatra
Mandeha mihoatra ny hatramin'izay i Cornall. Hoy izy hoe "Salama maraina… Salama maraina… Salama maraina" rehefa nandalo ny ekipa izy; maro no tompon'andraikitra amin'ny fantsom-pahadiovan'ny rivotra isaky ny miala amin'ny suite ny vahiny ary mampiasa jiro mainty eo amin'ny sehatra mba hahazoana antoka fa tsy misy lesoka diso lalana.
Mijanona eo amin'ny ascenseur izy ary mamela olona roa handeha amin'ny dia manaraka. "Mpivady iray isaky ny mandeha," hoy izy tamim-panajana. Rehefa tonga any amin'ny rihana fahatelo izy dia miakatra amin'ny fidinana ary mijanona indray.
"Heveriko fa isika rehetra dia nianatra tsy ho maika sy hahafantatra bebe kokoa ny manodidina antsika," hoy izy.
Namboarina ho an'ny tantaram-pitiavana sy fialan-tsasatra, ny Village Village Pool dia iray monja amin'ireo dobo rano velona 6 mahavariana ao amin'ny Sandals Grande Antigua ary trano fisotroana fisotro misy rano milomano misy an'i Sandals.
Avy amin'ny toerana ijanonany, ny masonao dia afaka manaraka mpivady iray mandehandeha amin'ny lalan'ny pavers misimisy kokoa mankamin'ny dobo be vongana ary mihoatra izany mankany amin'ny lanitra manga tanteraka sy ranomasina manga kokoa. Izy rehetra dia mitambatra amin'ny toerana tsy manam-petra tsy manam-paharoa. Ny fomba fijery mihitsy dia toy ny taloha ihany, fa ny fomba fijery dia mety "tsy hitovy mihitsy" satria tsy ny olona rehetra ve no maniry toerana mihoatra ny taloha?
“Enim-bolana lasa izay dia niato ny mpivady teto ary nilaza hoe 'ooh' sy 'aah' mety ho antsasaky ny minitra,” hoy i Cornall. “Dimy minitra izao. Mijery fotsiny izy ireo ary mifoka azy rehetra. ”
Mahatsapa ny tsio-dranomasin'i Karaiba avy any amin'ny lavarangana manokana anao izay mitazana ny ranomasina mandry ao Sandals Grande Antigua.
Tamin'io fanehoan-kevitra io dia nanaitra ny angamba ahiahy lehibe indrindra ho an'ny mpandeha izy: miaina rivotra taloha. Izay tsy maintsy manazava ny antony mahatonga ny mpivady tsirairay hijanona amin'ny toerana toy izany. Mamela ny hazavan'ny masoandro any Karaiba hamoaka ny ahiahy. Ny rivotra varotra tsy tapaka dia nanaparitaka izay sisa. Maka fotoana hiainana.
"Raha ny marina dia nahatsiaro ho voaro kokoa aho tao amin'ny toeram-pialan-tsasatra noho ny tao an-tanàna niaviako," hoy i Joanna Baumann, izay nandeha tany Sandals Grande Antigua miaraka amin'ny vadiny, Andrew, amin'ny volana Jona mba hankalazana ny tsingerintaonan'ny fanambadian'izy ireo. "Ny mpiasa dia nahatonga anay hahatsapa ho voaaro kokoa noho ny hatramin'izay, nefa tamin'izany fotoana izany dia tsy namoy ny ainay Sandaly milamina izahay."
Ny fijery misokatra, ny saina malalaka ary ny toerana malalaka dia tsy zava-mahatalanjona fotsiny eo amin'ny lavarangana misy rihana faha-3 ao Antigua. Ny marina eto dia marina ihany koa izay misy mpifoka miaina 1,000 kilaometatra miala ny lalan'ny nosy Sandals Jamaika.
Ireo bungalow Sandal South Coast Over-the-Water Bungalows, tonga lafatra ho an'ny fiainana manokana sy mitokana.
Ny fasika lava mamelatra ny ilany andrefan'ny Sandals South Coast any Jamaika dia mbola mangatsiatsiaka hatrany ambanin'ny tongotra amin'ny 8 ora sy sasany maraina. Mialokaloka tahaka ny moron-dranomasina, ny zana-paritra avo lenta any amin'ny faran'ny lalantsara lava dia hita nefa mbola lavitra toa ny ny volana. Tsy azo atao ny milaza raha misy olona any ivelany any, izay misy ny fitsokan-drivotra avy any an-dranomasina amin'ireo doba mandriaka any ivelany ary any amin'ny trano fisakafoanana misokatra eny amoron-dranomasina. Ireny "ny maraina ireny foana" - ny fitokana-monina, ny rivotra, ny rivotra tropikaly - dia mamono otrikaretina toy ireo protokolota henjana hita ao amin'ny boky matevina ao amin'ny Fototry ny fahadiovana amin'ny platinumin'ny kapa.
Ao anatin'ny Sandal Platinum Protocols of Cleanness, ny ekipa mpikambana rehetra dia miakanjo akanjo fiarovan-tena ary hita ho mitsiky amin'ny masony manafana.
"Manana ekipa mpanara-maso manokana izahay isaky ny toeram-pitsaboana izay manaraka ny torolàlana henjana indrindra avy amin'ny mpitsabo, ny Centers for Diseases Control and Prevention (CDC), ny World Health Organization (WHO), ary ny minisiteran'ny fahasalamana eo an-toerana isaky ny firenena antsointsika hoe trano, », Hoy ny mpanorina sy ny talen'ny Sandals Resorts, Gordon“ Butch ”Stewart.
Ny kiraro dia nitazona hatrany ny fenitra avo lenta momba ny fahadiovana sy ny fiarovana ny fiarovana, ary ankehitriny miaraka amina fepetra fanampiny, dia afaka milamin-tsaina ny vahiny rehefa mankafy ny fialokalofany am-pitiavana any Karaiba.
Anisan'ireo tsipiriany an-jatony maro: Ny rano ao anaty dobo dia voamarina isan'ora. Ny faritra rehetra - ny varavarana mihazona ny mpanamboatra kafe - dia zahana intelo isan'andro isan'andro. Ny seza fisotroana sy ny latabatra dia misintona lavitra kokoa. Ny fitaovam-pandrefesana dia voatahiry avy hatrany amin'ny vahaolana fanadiovana. Mitohy ny famafazana sy ny fanosehana, toy izany koa ny fisian'ny hazavana mainty.
Saingy angamba ny "protokol" tena mahomby dia efa am-polony taona maro izay:
“Ny fanoloran-tenantsika ho amin'ny tantaram-pitiavana. Aminay dia nitovy hevitra foana tamin'ny fanokanan-tena… rendrarendra… fiainana manokana ”, hoy hatrany i Stewart.
Ireo trano bongo amoron-dranomasina voaravaka amin'ny fasika no mahatonga ny toerana mety ho fisokafan'ny morontsiraka.
Mpivady mankafy cabanas amoron-dranomasina manokana, satria ny fitiavana dia mitaky fiainana manokana sy fitokana-monina - hevitra iray izay nananganana ny marika Sandals Resorts hatramin'ny voalohany.
Teny hafa no tonga ao an-tsaiko: ny fanalavitra ny fiaraha-monina. Jereo indray ny villa mpanamontsana, irery eo ambonin'ny Ranomasina Karaiba. Sa ny Rondoval Suites miparitaka manamorona ny morontsiraka ao St. Lucia. Na ny efitrano skypool ny volom-borona entin'ny rivotra ihany no ahazoana azy Grenady. Mety ho vaovao amin'ny fiteny andavanandro ny “fitsangatsanganana ara-tsosialy”, saingy tsy foto-kevitra vaovao ao amin'ireo trano fandraisam-bahiny ireo.
Fivarotana Sandal Grenada Skypool, tena manokana fa ny fijerena mahatalanjona sy milomano dia ny lavaranganao ihany.
"Raha ny tena izy, tsy mbola nahatsapa ho toy ny vahoaka be tao Sandals izahay," hoy i Baumann. “Izy io dia miavaka araka ny tiantsika hatao, saingy amin'ny ambaratonga hafa tanteraka izy io ankehitriny. Nametraka eritreritra be dia be tamin'ny famelana ny zava-drehetra izy ireo, ary izany dia nahatonga anay hahazo aina tamin'ny fiarovana tamin'ny minitra nahatongavanay. Ary avy eo… dia tsapa fa anay daholo ilay fialantsasatra. ”
Hevitra nantsoina hoe manavao, na dia mahery vaika aza, amin'ny fikatsahan'i Sandals ny traikefa farany tantaram-pitiavana miseho fortuitous izao. Private dobo tsy manam-petra. Private tubo amin'ny veranda. Private bara anatiny Amin'ny morontsiraka roa kilaometatra ny halavany, ny mpivady dia afaka mangataka fasika iray hektara mba hijanona lavitra. Ny fanapahan-kevitra hampidirina amina farihy manokana 105, hatramin'ny dobo lehibe miisa fito ary 16 trano fisakafoanana amin'ny fananana goavambe iray dia tsy mbola natao hanintonana vahoaka. Ny hampihenana azy ireo.Kapa-Royal-
Midira ao anaty Sandal Royal Barbados Royal Rondoval Butler Suite; fandosirana tantaram-pitiavana izay miaraka amin'ny dobo manokana sy fandroana milomano milamina ho an'ny roa.
Indraindray dia misy olona iray hafa miseho: ny mpitondra kapoaka. Ho an'ny mpivady ao anaty suite toy izany, ny mpandroso zava-pisotro ihany no toha-olombelona - mampiasa fonon-tànana fotsy. Ny tsy tsikaritr'ireo vahiny dia ny mpitondra mpivarotra tsirairay, sy ny mpikambana ao amin'ny ekipa tokana, dia mandalo fahazarana isan'andro isan'andro rehefa tonga any amin'ny trano. Misy ny fizahana mari-pana, fanovana akanjo tsy maintsy atao, ary ny "fandroana kiraro" hanadiovana sy hamonoana ny otrikaretina.
Ny fahadiovana madio dia miitatra mihoatra ny mpiasa sy any amin'ny efitranon'ny vahiny rehetra. Fotoana fijanonana sy fiatoana hafa indray izao. Ny lamba malefaka vao avy notetehina fotsiny, nofenoina ny tobin'ny mpanadio, novonoina vokatra avy amin'ny hopitaly ny trano fidiovana. Ny nuansa rehetra, manomboka amin'ny fatam-pandriana ka hatramin'ny varavarana veranda mihetsiketsika, dia nandalo ny fitsapana.
“Ankehitriny, na ny tavoahangin'i Appleton Estate Signature Blend ary Robert Mondavi Twin Oaks mamiratra, ”hoy i Cornall.
Sandals Grande Antigua, toerana nahalasa vola ny fiainana manokana manokana, ary fari-dranomasina fotsy sy turquoise no fenitra.
Isaky ny mandeha an-tongotra any amin'ny trano fisakafoanana na amoron-dranomasina i Joanna sy Andrew Baumann dia mijery manodidina izy ireo ary mihaino. Miditra ao, hoy i Joanna, "ny kiraro efa mahazatra nahazatra anay." Raha misy dia matevina kokoa ny vibe. Tsy azo ihodivirana io. Ary - andao fotsiny hatao ny marina ary milaza ny teny - dia mifindra. Mahafaty tokoa ny fahalalahana miaina sy mihetsika ary misotro amin'ny toe-tsaina mahazatra. Raiso amin'ireo izay efa anisan'ireo voalohany niverina: Mitovy amin'ny mahazatra hatrany, ary angamba mbola tsara kokoa noho ny taloha aza.
Robert Stephens, mpanoratra, dia mpivady 20+ taona & rain'ny zanakavavy; Ny laharam-pahamehan'ny laharam-pianakaviana, ny fiaraha-monina ary ny fotoana fohy notanan'i Robert ho mpitondra kapoaka, mpiambina amoron-dranomasina, & mpahandro "crepe" any Sandals dia namolavola ny fomba fijeriny ny dia sy ny asa sorany.